शालिकरामले बनाएकोओर्जिनल भिडियो बच्चा नभएको पिडा पनि पोखेका रहेछ्न – हेर्नुस भिडियो - Kavre Online
काठमाडौं । रवी लामिछानेविरुद्ध पत्रकार सालिकराम पुडाशैनीकी श्रीमती सम्झना घिमिरेले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएकी छिन् । गएको साउन २० गते चितवन बसपार्कस्थित होटल कंगारुमा पत्रकार शालिकराम झु ण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । पुडासैनीले म र्नुअघि आफुलाई आत्मह त्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै भन्दै चर्चित संचारकर्मी रवी लामिछाने, युवराज कडेल र अस्मिता कार्कीको नाम लिएर भिडियो रेकर्ड गरेका थिए ।
सो भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तिनै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध पीडित परिवारले आइतवार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । मृतककी श्रीमती सम्झनाले आफैं प्रहरीमा उपस्थित भएर किटानी जाहेरी दिएकी हुन् ।
किटानी जाहेरीमा उनले आफ्ना श्रीमानलाई लामिछाने, कँडेल र कार्कीले ह त्याको बाटो रोज्न बाध्य पारेकाले उनीहरुमाथि मुलुकी अ पराध संहिताको दुरुत्साहनअन्तर्गत कार बाही गर्न माग गरेकी छन् । पुडाशैनीको १३ दिनको काजक्रिया शनिवार सकिएपछि उनी आइतवार जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेकी हुन् ।
252 Post Views
Prevकसरी बाहिरियो शालिकरामको भिडियो? भिडियो बाहिर निकाल्ने ब्याक्तिले दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
Nextसात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला
तपाइको नाम कुन अक्षरबाट सुरु भएको हो ? अक्षरबाट हेर्नुस स्वभाब भाग्य र भबिस्य ! शेयर गर्नुहोस !
यी तीन राशि हुनेले लगाउनु हुँदैन् सुन, जीवनलाई हुन्छ नोक्सान (5,985)
सुत्नुभन्दा पहिला उमालेर खाने गर्नुहाेस् केरा, केहि… (1,355)